HMF : Atambaro ny hery handresen’ny fahamarinana – MyDago.com aime Madagascar
HMF : Atambaro ny hery handresen’ny fahamarinana
« Raha misy maharesy ny irery aza, ny roa tsy ho leony tsy akory, ary ny mahazaka telo olana tsy mora tapahina » Mpitoriteny 4:12. Io no lohahevitra noraisin’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF nanatontosa ny hetsika fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana ny raharaha FIGN, ny 20 May 2010, indrindra ireo namoy ny ainy. Teny amin’ny Gradin Anosivavaka Ambohimanarina toy ny mahazatra azy ireo no nanaovana ny hetsika androany. Nisy ny fanambarana taorian’ny fotoam-pivavahana. Voalaza ao anatin’izany fanambarana izany fa tonga amin’ny kion-dalana iray lehibe izao ny tolona nitakiana ny hampijoroana ny fahamarinana eto amin’ny firenena, notarihin’ny HMF. Tsyirery isika hoy izy ireo amin’ny fitakiana izany ary azo lazaina ho valimbavaka izany. Marobe hoy ny HMF ankehitriny ireo sokajin’olona mitaky izany ho an’ny firenentsika. Heverinay hoy hatrany ny HMF fa dingana manaraka dia ny fananatsika rehetra fahasahiana hivavaka sy hiasa amin’ny fanorenana ampitso tsara kokoa ho an’ny firenena, ao anaty fahafahana sy fahamarinana marina. Niantso ny vahoaka izy ireo mba hijoro ary tsy hangina mandra-piposaky ny fahamarinana eto amintsika.
Vidéo-Atambaro ny hery, aza zarazaraina, Zafilahy
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 mai 2012 Catégories Politique
15 réflexions sur « HMF : Atambaro ny hery handresen’ny fahamarinana »
Tena mahamenatra mihitsy ny ataon’ireto mpitarika ato amin’ny FJKM ireto an! Izany dia tena hoe ampifangaroan-dry zareo Pastiora mihitsy ny finoana sy ny pôlitika. Tsy mahagaga aloha raha lasa sekta ny ankabeazan’ny mpino ato amin’ity fiangonantsika ity e! Hita manko fa ny saosy very mihitsy no tsy zakan-dry pastiora hatramin’izay nionganan’i dada ratsy saina izay e! Tena avadik’ireto pastiora ireto ho bokim-pitiavan-tena mihitsy manko ilay Baiboly Masina, boky mitory ny fitiava-namana. Tena mampahalahelo ny toetranareo pastiora an! Mariana mihitsy ilay tenin’i Jesôsy manao hoe: « Ny mpivaro-tena no hialaoha anareo any ami’ny fanjakan’Andriamanitra ». Raha ny marina aza dia hoe any amin’ny afo mirehitra solifara no mendrika anareo pastiora mpanaraka an’i dada mpamono olona sy mpangalatra ireo!
20 mai 2012 à 9 h 31 min
Fisaorana lehibe no atolotra ho anareo ao @ HMF. @ fotoana toy izao (tsy hoe fampitandremana ny mpanararao-pat ihany fa na ho an’ny olo-misaina rehetra mahatsiaro ho irery aza)no anandratana ny fitenin’ny razantsika hoe : »aza ny lohasa mangina no jerena fa Andriamanitra ao antampon’ny loha ». Dia ento am-bavaka tompoko ny fanavotana ny firenena sy ny olona very toan’dry radenise. Toa mba miteny ianao radenise hoe « fiangonantsika » nefa tena kely fahalalana ny amin’izany. Tsy hainao mihintsy ny tantara ny fiangonana protestanta. Fomba fitaizana ao @ FJKM ny mandeha @ fifidianana fa tsy misy olona iray voatendry tsy nierana ao. Dia izay no mampitsangana ireo mpitandrina ireo satria na ny lalampanorenana aza ananganan-tanan’ny Filoha voafidy eo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy. Mazava ? Hainao ve fa mety efa misy toerana votokan’ny satana ho anao sy ny mpiandry FAT rehetra voarebiren’ny irakany tety ambonin’ny tany? Any @ helo io toerana io! Koa tongava saina fa efa betsaka ireo namanareo tsy niandry ny fotoana fitsarana akory fa tonga dia efa mibaby izany ety an-tany ary marina fa ety an-tany no fanombohan’ny na ho fiadanana mandrak’izay na ho fahoriana mandrak’izay. Dia mibebaha sy mivavaha!
Izany no tena Zanakidada!!olona misaina sy mandinika,
mankasitra e!!homba antsika Andriamanitra!tsy maintsy mandresy ny tolona!!
MAHEREZA RY MPITONDRA FIVAVAHANA a! Homba anareo anie Jesosy Kristy Tompo! Aza kivy fa ny mpanenjika ao aoriana ao foana. Betsaka ary tena maro ny momba izao hetsika ataonareo izao e! Aina ity hoy Raini-manonja, ain’ny Firenena malalantsika. Ny sasany aza lainga no mipoapoaka, halatra no ivelomana mahita vahoaka 3% mpanaradia koa vao mainka olona mivavaka tahaka anareo no tsy hahita vahoaka 97%. Mahereza e!
Mazava be fa tsy tantin’ny FOZA ohatran-dry Denise ny hetsika ho an’ny fahamarinana tohananareo Mpitondra fivavahana.
Fahatsiarovana ny namonoan’ny FAT ny Pastera Rivo no anisan’ny nanaovanareo iny fotoam-pivavahana lehibe iny ! Tsy mbola nisy mpitondra fanjakana teto ka sahy namono mpitondra fivavahana raha tsy ity fitondrana azo avy tamin’ny tsy rariny ity.
Mahereza ianareo Mpitondra fivavahana ao amin’ny HMF fa « sambatra izay enjehina nohon’ny fahamarinana !
Raha ny hita dia olom-bitsy mahita tombony amin’ity fitondrana mpamono olona sy mpangalatra ity no manenjika anareo.
Aoka hotohizanareo mafimafy hatrany ny vavaka asandratra ho an’ny firenena. Tsy maintsy resy ny Lainga izay nafafy teto nandritra izay telo-taona izay.
Mitombina tanteraka ny hetsika tarihinareo HMF
Manohana anareo hatrany izahay Kristianina mahatsapa ny tsy rariny atao eto amin’ny Firenena
21 mai 2012 à 14 h 07 min
Taiza moa no hahalalan´i Denise Fiangonanana ,ry zareo anie zanak´i Losifera ,miaraka aminí radomelina lavanify e!
I denise anie mpivarotra lavakely no tena sany , ka inona no ahafantarany izay fiangonana, sy ny momba ny fiangonana.
Na hivavaka ho azy aza isika rehetra , tsy folaka ny vavaka intsony io, moa tsy ho voakasikin´ny Fanahy Masina. Efa vita voady sy Jaobily tao amin´i Losifera ireo sy ny tarika TGV ireo ary ny FAT mpanongam-panjakana isnay avy e!
zo a!! efa mandaitra hatry ny ela ny vavaka natao, ireny ry rasarla nibaboka sy namosaka, ireny ry lalatiana izao, mamosaka, ny sasny maty tampoka, ny sasany fanina tahaka ry rohindefo …..
mbola be ny ho avy fa mateza ny aina ahitana ny farany.
Io ilay hoe. ANDRIAMANITRA tsy andrin´ny hafa , andrintsika vahoaka sy zanak´i DADA
Oadray hanenjika mpitondra fivavahana Denise mpivaro-pika leiretsy zany tokoa dia oe ny devoly eo foana an! ary mety ho mifoka daina mintsy kou denise an! mahita ny tsy fahitan4ny olona mantsy!
Efa halazo ny PIKA atsy ho atsy fa tsy hisy hanondratondraka intsony hi!hi!hi!!!!
ka aiza izy no tsy hankahala ny mpitondra fivavahana fa fantany fa tsy ireo mihintsy
no HANIPINIPY RANO NY KETSANY ha!haha!!!!
21 mai 2012 à 23 h 17 min
denisem-pika an! Mdr!!!!!!!!!
Tsy afaka misaraka @ zavatra rehetra miseho amin’ny fiainana an-davan’andro ny Ray aman-dreny am-panahy, fa tena adidiny izany.
Manoro sy Mitaiza izy etc ….
22 mai 2012 à 8 h 13 min
marina ny anao ry denise a:
afangaroy ihany ny fivavahana à pôlitika, ts efa izany v no nionganandraosy teo de mbola manao ihany????? zay le be loha ts laitra tenenina zay ange no mahatonga andry zareo hitanina andro ao @ magro nandritra ny 3 taona. amiko aza atao fitaovana @ pôlitika le fivavahana fa aleo izy ho any ampiangonana sao de hotezeran’Atra ireo manao fitaovana ny fanompoana azy.
22 mai 2012 à 8 h 44 min
Manohy anao aho ry Hery
…….. deraina manokana izireomahasahy mijoro sy maka ny RISIKA toy izao,
fa toy ireo FFKM toa misalasala fa ao mantsy ilay OMAR ,mbola tsy maty kilolo !!!toa alasafay fotsiny fotsiny
ny azy ireo. »Tokony hifona i domelina » dia niantona eo dia tsy hita ny tohiny??nefa raha tsy teo OMAR tsy ARY
i domelina, tsy tonga t@ izao fahavoazana izao isika, teny hiarana ny namono ny voay koa nony maty koa hoe:
hano ho an’i domelina irery, hadinon’i Omar fa izy aza no mbola tompon’andraikitra voalohany noho i DOmelina
satria izy olona ao anatin’ny FAHALALANA ary OLOMBOAHOSITRA,olon’Andriamanitra?????izany no zavamisy.
Misaotra anareo Pasitera mbola sahy mijoro mitarika ny olona hivondrona hanambatra ny hery indrindra herin’ny fahamarinana , tena ilaina izany amin’izao vanimpotoana misy antsika izao satria tena fanina ny vahoaka izaho tsy hiteny hoe ny Mpino satria ny Mpino dia efa mahafantatra tsara izay hinoany fa ny vahoaka no fanina ka mila antsika Mpino hanambatra ny hery handresy ny maizina misy eto amin’ny tanintsika ity, andao mitsangana ry Mino rehetra hanavotra an’I Madagasikara isika tsy avelantsika raha tsy miaina ao anatin’ny fahamarinana i Madagasikara hanjakan’ I JESOA KRISTY. AMEN
Précédent Article précédent : US Embassy Madagascar : Declaration sur les menaces a la liberte de la presse a Madagascar
Suivant Article suivant : Mamy Rakotoarivelo : « tsy izaho no zava-dehibe fa ny filoha Ravalomanana »